News | Tag: love
यी राशिका व्यक्ति प्रेममा छिट्टै पर्छन्
काठमाडौँ । मीन राशिका मानिसहरू जस्तै मेष राशिका मानिसहरू पनि सजिलै प्रेममा डुब्छन् । उनीहरू प्रेममा धैर्य राख्न सक्दैनन् । किनकि यो राशिमा मानिसहरू स्वभावले आक्रामक र छिट्टै निर्णय लिने खालका हुन्छन् । यो राशिका मानिसहरूले कहीँ कसैलाई पनि प्रेम प्रस्ताव राखिदिन सक्छन् ।
जिन्दगी, प्रेम र कविता
आज बिहानै ट्रेन समातेँ । अभिको प्रेमले निचोड पाओस् भनेर एक हप्ताको लागि उसको जागिर धान्न खोज्दैछु । मैले अफिस खोलेर मात्र एक घण्टा बसिदिए पुग्छ ।
लाइदेऊ, लाइदेऊ, माया लाइदेऊ...
“होइन, हामीलाई के ठान्छन् भन्या मान्छेहरु ? तिमीहरुले यस्तो गर त्यस्तो गर भन्छन् बा । जबर्जस्ती के !” अचम्मको टोनमा कृजन भाइले भने । उनको बोलीमा रिस थिएन, खुसी थिएन, गुनासो पनि थिएन ।
पति पत्नीको प्रेम प्रगाढ बनाउन के गर्ने ?
एक दाजु भाई हरेक दिन समुद्रको किनारै किनार हिड्ने गर्थे । सँगै हिड्दा दाजुले कहिलेकाही भाईलाई पिट्ने वा गालीगलौज गर्ने गथ्र्यो । तर, भाई जवाफ फर्काउँदैनथ्यो, बरू रिस उठ्नासाथ दाजुले आज गाली ग¥यो भन्दै वालुवामा लेख्थ्यो । कुटेको दिन पनि त्यस्तै गथ्र्यो कि दाजुले नराम्ररी कुट्यो ।
भुटानी राजा रानीको प्रेम कथा
प्रेमिकाले धोका दिएको भन्दै एक युवकले यस्तो हर्कत गरे
एजेन्सी। प्रेममा मायामात्रै हुँदैन धोका पनि हुन्छ । प्रेम हुँदा सबै राम्रो लाग्छ भने धोका भएपछि सबै थोक बिग्रिएको अनुभुत हुन्छ । ब्राजिलमा एक जना प्रेमीले केही यस्तै अनौठो हर्कत गरेका छन् ।
संजय दत्तका यी १० प्रेमिकाहरु
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् संजय दत्त । उनको लभ अफयेरका किस्सा पनि उत्तिकै चर्चामा रहेका थिए । विवाहका कारण पनि उनी चर्चामा आएका थिए । उनको १० वटी युवतीसँग लभअफयेर चलेको एक अन्तर्वार्तामा उनले नै बताएका थिए । यस्ता छन् उनको अजबगजबको लभस्टोरी चलेका युवतीहरुको नाम
केटा प्रेममा परेको कसरी थाहा पाउने ?
एजेन्सी । केही यस्ता कुराहरु रहेका छन् जसबारे जान्न युवतीहरु ललायित हुन्छन् । प्रेममा परेको मानिसको चालढाल नै फरक हुन्छ । महिला र पुरुष दुवैको व्यवहार प्रेमले परिवर्तन गरिदिन्छ । यहाँ हामी प्रेममा परेका केटाहरूले कस्तो लक्षण देखाउँछन् बताउँदैछौं । युवकको कुरामा आएका परिवर्तनलाई बुझ्न के कस्ता कुरामा ध्या दिने ?
विश्वकै यी चर्चित क्रिकेटरहरु जो बलिउड अभिनेत्रीको माया जालमा परे
केही बउिलउड अभिनेत्रीहरुहरुको लभ अफयेर फिल्म क्षेत्रभन्दा पर क्रिक्रेट खेल्नेहरुसँग पनि रहेको छ । यस्ता धेरै बलिउड अभिनेत्रीहरु छन् जो क्रिक्रेटरसँग लभ अफेयर रहेका कारण चर्चामा रहेका छन् ।